Nnwom 150 NA-TWI - Kamfo Awurade - Kamfo Awurade! Kamfo - Bible Gateway
Nnwom 149Mateo 1
Nnwom 150 Nkwa Asem (NA-TWI)
150 Kamfo Awurade! Kamfo Awurade wɔ ne fi! Kamfo ne tumi wɔ soro! 2 Kamfo no wɔ nneɛma akɛse a wayɛ no ho. Kamfo ne kɛseyɛ. 3 Momfa ntorobɛnto nkamfo no. Momfa asanku ne bɛnta nkamfo no. 4 Momfa nkyene ne asaw nkamfo no. Momfa asanku ne mmɛn nkamfo no. 5 Momfa kyɛnkyɛnn nkamfo no. Mommɔ kyɛnkyɛnn dennen nkamfo no.